Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamaanka Galmudug oo Sheegtay In Ay Xilkii Ka Xayuubiyeen Madaxweyne Xaaf • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamaanka Galmudug oo Sheegtay In Ay Xilkii Ka Xayuubiyeen Madaxweyne Xaaf
Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamaanka Galmudug oo Sheegtay In Ay Xilkii Ka Xayuubiyeen Madaxweyne Xaaf
September 26, 2017 - By: HORSEED STAFF
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa war saxaafadeed ay ka soo saareen fadhi aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen Hoteel ku yaala Cadaado in ay Xilkii ka xayuubiyeen Axmed Ducaale Geele (Xaaf) oo la doortey 29 Abril 2017.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa isugu yimid fadhi aan caadi ahayn, kadib markii shirguddoonkoodi uu xabsi guri geliyey Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele.
Xildhibaanada ayaa fadhigooda ku qabsadey mid kamid ah Hoteelada magaalada Cadaado, waxaana ay iska dhex doorteen shirguddoon kumeel gaar ah sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanku maadaama shirguddoonkoodi xabsi la geliyey.
Fadhiga aan caadiga ahayn, oo ay soo xaadireen 55 Xildhibaan oo shirguddoonkoodi xiran yahay, ayaa la horkeenay Mooshin xil ka qaadista Madaxweynaha Galmudug oo ay ku saxiixan ytihiin 45 Xildhibaan, sida ay sheegeen Xildhibaanadu waxaa Mooshinka la mariyey harbaaca uu qabo Dastuurku, maadaama Madaxweynuhu ku xadgudbey Dastuurka Galmudug, isla amrkaana ku xadgudbey masuuliyiin xasaanad leh, waxaana loo qaadey codka xil ka xayuubinta.
52 Xildhibaan ayaa u codeeyey in xilka laga xayuubiyo Axmed Ducaale Geele Xaaf, waxaa diidey 2 Xildhibaan waxaana ka aamusey hal Xildhibaan oo keliya. Tirada guud ee baarlamaanka Galmudug ayaa ah 89 Xildhibaan.
War saxaafadeed ka soo baxay Xildhibaanada ayaa lagu sheegay in muddo 30 maalmood ah gudahood lagu dooranayo Madaxweyne cusub.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo saxaafadda maanta ilaa shalay la hadley ayaa sheegay in uu ka bixi waayey guriga uud eganaa oo ciidamo isku gedaameen, isla mnarkaana u sheegeen muddo shan maalmood ah in aanu guriga ka bixi karin, waxaan ku jira xabsi guri waxaa igu weheliyey Madaxweyne kuxigeenkii iyo Guddoomiye kuxigeenkii kowaad, waxaana xabsiga na geliyey Xeef (Xaaf) ayuu yiri Gacal.
Maamulka Galmudug ayaa dhismihiisi dhib badan loo soo marey kadib markii uu buuxnin waayey sida dastuurku qabo laba gonbol iyo ka badan, inta badan dhulka Galmudug waxaa ka taliya Al-Shabaab iyo maamulka Alhu-suunah oo xitaa haysta Caasimadda dastuurka ugu qoran maamulka Galmudug.
Axmed Ducaale Xaaf ayaa ka mid ahaan jirey hoggaamiye kooxeedyadii Koonfurta Soomaaliya, waxa uu ganacsade Qaadka waxaana suu si gaar ah u maamuli jirey garoonka Lanbar 50, Cadaado waxa uu ka soo buuxuyey ciidamo u badan beeshiisa kuwaas oo xabsi guri geliyey Madaxweyne kuxigeenkii maamulkaas iyo weliba shirguddoonka Baarlamaanka, Waxaala is weydiinayaa waxa Galmudug sharci ka ah maanta.
Dowladda Federaalka oo laga doonaayey in ay xaliso xasaradda Galmudug ayaa isla Madaxweynaha Xildhibaanadu xilka ka qaadeen uu ku eedeynayaa Dowladda Federaalku in ay ka danbeyso xasaradda ka taagan Galmudug. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Faarax Siciid ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda in uu safar ugu baxo dalka Finland, mana muuqato waan waan Dowladda federaalku ay halkaas ka geysan karto, si lamid ah tii Hirshabelle oo dooratey Madaxweyne cusub inkasta oo maamulkaasina aanu lahayn wax haykal maamul ah.